ဖရက်ဒီရဲ့2Demo မှာငါး Nights | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ဖရက်ဒီရဲ့2Demo မှာငါး Nights
ဖရက်ဒီရဲ့2Demo APK ကိုမှာငါး Nights
ဒါကဖရက်ဒီရဲ့2မှာငါး Nights ၏တရားဝင်ဆိပ်ကမ်းဖြစ်ပြီး: Demo version ကို! အဆိုပါသရုပ်ပြသငျသညျတညဉျ့ 1 play ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီဂိမ်းကိုသိုး 512 megs တောငျးသတိပြုပါ။ သင့်ရဲ့ device ကိုကဝယ်ယူရှေ့မှာ run နိုင်ပါလိမ့်မည်ကြောင်းသေချာပါစေ။ သင်တစ်ဦးအသစ်များရဲ့ဖုန်းရှိပါကဖြစ်လျှင်ဤပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်သင့်!
အသစ်ကများနှင့်တိုးတက်ဖရက်ဒီ Fazbear ရဲ့ပီဇာဖို့နောက်ကျောမှကြိုဆိုပါ၏!
ဖရက်ဒီရဲ့2မှာငါးညဉ့်အခါ, ဟောင်းနှင့်အိုမင်း animatronics ဇာတ်ကောင်အသစ်တခုသွန်းခြင်းဖြင့်ပူးပေါင်းနေကြသည်။ သူတို့ကဆိတ်သငယ်-ဖော်ရွေ, မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာနောက်ဆုံးပေါ်အတူ updated ဒေသခံပြစ်မှုဆိုင်ရာ databases ကိုသို့ချည်ထားဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ရောနှောလေးတွေနှင့်စိုက်ပျိုး-ups အဘို့အလုံခြုံနှင့်ဖျော်ဖြေမှုပြပွဲအပေါ်ထားရန်ကတိပေး!
ညအလုပ်လုပ်ကိုင်သစ်ကိုလုံခြုံရေးအစောင့်အဖြစ်, သင့်အလုပ်ကင်မရာများစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဘာမျှမပြီးနောက်-နာရီမှားယွင်းနေတတ်သေချာအောင်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယခင်ကိုယ်ရံတော် (သူကတည်းကတစ်ရက်-ပြောင်းကုန်ပြီရွှေ့လိုက်ပြီ) ရုံးသို့ရရန်ကြိုးစားနေသည့်ဇာတ်ကောင်တွေအကြောင်းညည်းညူခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်, သငျသညျကိုသူတို့မတော်တဆသင့်ရဲ့ရုံးခန်းထဲသို့ဝငျသငျ့သညျဆိုပါကတစ်ဦးတည်းကိုသင်ထွက်ခွာသို့ animatronic ဇာတ်ကောင်အရူးသငျ့သညျမူသောသင်တို့အလွန်ကိုယ်ပိုင်ဗလာဖရက်ဒီ Fazbear ဦးခေါင်း, နှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
အမြဲအဖြစ်, Fazbear Entertainment ကသေခြင်းတရားသို့မဟုတ် dismemberment တာဝန်ရှိသည်မဟုတ်ပါ။
ဖရက်ဒီရဲ့2Demo မှာငါး Nights
39.51 ကို MB
မှာငါး Nights ...
အဘယ်မှာရှိ Shadows ...